CRM sosialy: fitantanana ny fifandraisana ara-tsosialy sy fifandraisana amin'ny mpanjifa
Ny Fifandraisan'ny Fifandraisana amin'ny mpanjifa dia lakilen'ny ankamaroan'ny fikambanana, manome azy ireo ny faharanitan-tsaina sy ny angon-drakitra ilain'izy ireo mba hitazomana fifandraisana tsara amin'ireo mpanjifany. Ny fametrahana ny haino aman-jery sosialy eo ambonin'ny hetsika fifandraisan'ny mpanjifanao dia afaka manafaingana ny zava-bitan'ny orinasanao ary manangana fifandraisana miha-hentitra kokoa - ka miteraka fotoana bebe kokoa hifandraisana amin'ireo mpanjifa ivelan'ny fizotry ny fomba ofisialy sy hananganana fiaraha-monina.
Ny Emailvision dia namoaka ny Social CRM ho an'ny Dummies, ebook maimaim-poana izay hanampy ny orinasa hahatakatra ny mahasamihafa azy CRM sosialy sy CRM ary koa ny fomba fampiasana ny sosialy amin'ny ezaky ny CRM.
Avy amin'ilay boky: ny haino aman-jery sosialy sy ny tambajotra dia nanova ny toekarena manerantany ho lasa zavatra hafa toa ny tsenan'ny tanàna kely, izay toerana anaovan'ny vondrom-piarahamonina, fa tsy ny buzz marketing, no mivoatra na tsia ny orinasa. Ny CRM sosialy dia valiny stratejika amin'ity tontolon'ny asa vaovao ity. Miaraka amin'ny CRM sosialy:
Ny fifantohana dia ny fananganana fiaraha-monina sy ny fifandraisana.
Amin'ny alàlan'ny toerana ara-tsosialy, ao anatin'izany ny Facebook sy Twitter, ny mpanjifa dia manana sy mifehy ny resaka.
Ny serasera dia orinasa-ho-mpanjifa fa koa mpanjifa-to-mpanjifa sy mpanjifa-to-fanantenana.
Miara-miasa amin'ny orinasa mivantana na ankolaka ny mpanjifa hanatsarana ny vokatra, serivisy ary ny traikefan'ny mpanjifa.
Tsy dia mandeha amin'ny fomba ofisialy ary "tena izy" ny resaka, mifindra miainga amin'ny marika miresaka amin'ny fitenenana eny amin'ny fiaraha-monina.
Ny eBook dia manome ny fampahalalana rehetra ilaina - manomboka amin'ny fananganana paikady, ny fisafidianana ny haitao mety, ny fampiasana ny teknolojia, ny fampiofanana ny mpiasanao, ny fandrefesana ny valiny - hatrany amin'ny fomba hisorohana ny fandrika mahazatra.
Fampahafantarana feno: Nahazo kinova alohan'ny famoahana ny eBook aho ary nanoratra tolo-kevitra momba izany. Emailvision dia efa mpanjifan'ny DK New Media .
10 Aogositra 2011 amin'ny 7:58 PM
lahatsoratra mahafinaritra! CRM ara-tsosialy dia tena eo an-dàlam-pandrosoana. Efa nandre momba an'i GreenRope ve ianao? Mamela anao hitantana ny CRM sy ny zavatra hafa rehetra amin'ny dashboard iray.